मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ अध्यक्ष: नेम थापामगर, मगर संघ युके – Magar Association United Kingdom
संयुक्त अधिराज्य (युके)मा बसोबास गर्ने मगरहरूको छाता संगठन मगर संघ युकेले हरेक वर्ष चर्चित सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। खासगरी, बुद्ध जयन्ती अर्थात् चण्डी पूर्णिमाको सन्दर्भ पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमको नाम विगतमा ‘बुद्ध पूर्णिमा ओपन कन्सर्ट’ थियो। तर, यसपालीदेखि भने ‘नेपाली ओपन कन्सर्ट’का नाममा गत जुन ३ तारिखमा कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ। मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापामगरसँग मगर समुदाय र मगर संघ युकेका गतिविधिका बारेमा पत्रकार रूद्र श्रीसमगरले गर्नुभएको कुराकानी:
आजभोली के गर्दै हुनुहुन्छ?
सर्वप्रथम त, धन्यवाद यहाँलाई। केही समय अघि मात्र हामी जुन ३ तारिखमा ‘नेपाली ओपन कन्सर्ट’ भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं।हामीले कार्यक्रमबारे समीक्षा पनि गरिसक्यौं। कार्यक्रम निकै राम्रो र सफल भएको निष्कर्ष निकालेका छौं। अन्य दैनन्दिन व्यक्तिगत काममा पनि निरन्तर व्यस्त छु।
नेपाली ओपन कन्सर्टको खास महत्व के छ?
यो चाहिँ खास युके मगर संघ स्थापनाकालदेखि युकेमा वर्षमा समरको बेलामा भेटघाट गर्ने कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको हो। वार्षिक भेलामा भोज खाने, बाट सुरु भएको छ। सन् २००७ मा आएर भेटघाट मात्र गर्न भन्दा कन्सर्ट जस्तो गरौं भनेर कलाकार ल्याएर सन् २००७ बाट सुरु भयो। बुद्ध पूर्णिमा ओपन कन्सर्टबाट ‘बुद्ध नेपाली ओपन कन्सर्ट’। अहिले चाहिँ नेपाली ओपन कन्सर्ट। हामी बुद्ध पूर्णिमा मनाउँछौं, छुट्टै गर्ने भएको हुनाले म्यूजिकको रुपमा मात्रै। धेरै भन्दा धेरै मगरहरू, ओपन कन्सर्टमा ल्याएर राख्ने भन्ने हुँदाहुँदै धेरै प्रकारका संस्कारहरू छन्। एकै कलरको बन्न नमिल्ने हुनाले यसलाई विशुद्ध म्यूजिकको मनोरञ्जनका रुपमा मनाउने सोंचेका छौं। बुद्ध नेपाली ओपन कन्सर्टलाई पनि पुनर्विचार गरेर नेपाली ओपन कन्सर्ट राख्यौं। युकेका नागरिकलाई पनि मनोरञ्जन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। कहिले मनाउने र किन मनाउने भन्दा मगर संस्था भएकाले देशप्रतिको नागरिक पनि हो, हाम्रो पनि केही कर्तव्य छ। नेपाली भएर नेपाली ओपन कन्सर्टमार्फत् बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने कुरालाई संसारभरि सन्देश दिन चाहन्छौं। बुद्ध र सगरमाथाको देश नेपाललाई चिनाउन चाहन्छौं। म्यूजिकमार्फत् युवा पुस्तालाई सन्देश पुर्याउने र मनोरञ्जन पनि दिने हाम्रो लक्ष्य हो ।यस अनुसार हामीले यो कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएका छौं।
मगर संघ युकेको तर्फबाट विश्वभरिका मगरहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रो संस्कार, भाषा, भेषभूषाको जागरण र राजनीतिमा समेत मगरहरूलाई बढायो, मगर संघले। ३५ औं वर्षसम्म आइपुग्दा ३५ देशभन्दा बढीमा संस्था खुलिसक्यो। भाषा जागरुक गर्नुपर्ने छ, मगरातलाई अभियानकै रुपमा लानुपर्ने छ। एउटा कदम मगरहरूलाई कल्चरको रुपमा अपनाएर आएको गाउँमा केही चिजमा पछ्याइरहेको छ। बाध्यताले गाउँमै बाँधिइराखेको छ। आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्न जरुरी छ। अब मगरहरूलाई समृद्धिमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवसायतिर लगाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ। आर्थिक उत्पादनतिर लाग्ने वातावरण बनाउनेमा ध्यान दिनु जरुरी छ। धेरै जनसंख्या भएकोले हामी भाग्यमानी छौं। सानो सानो रकमबाट ठूलो लगानी गर्न सकिन्छ । सामूहिक लगानीमा गयौं भने संस्थालाई नै मदत गर्छ। जोखिम र अवसर दुवै हुन्छन्, तर, सामूहिक लगानीमा जोखिम कम र अवसर धेरै छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सामूहिक लगानीतिर लैजान सक्छौं। युके, हङकङ लगायतका विभिन्न देशका मगर संघले एकले अर्कोको देखेर सिक्न सकिन्छ। स्वास्थ्य, हाउजिङ, पावरसम्बन्धी, प्रविधि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। आर्थिकस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि सबैले आÞवान गरौं। एकले अर्कोको सिक्न पाउनुपर्यो। ३५ वर्ष अगाडि यदि नेपाल मगर संघले लगानी गरेको भए एक दुई वटा जिल्ला किनिसक्थ्यो। तर, हामी व्यवसायिक सोंच पलाउन सकेन। आर्थिकस्तर माथि उठाउनका लागि पनि यसले ठूलो सहयोग पुर्याउछ। अब यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु।
मगर जातिको मुक्ति र समृद्धिका लागि अबको बाटो के हो?
म के भन्न चाहन्छु भने सबै मगरलाई सन्देश फैलाउनका लागि ग्लोबल कन्फरेन्स गर्नु जरुरी छ। एकपटक मात्रै होइन, हरेक चार चार वर्षमा गर्ने लक्ष्य हुनुपर्यो। अबको १५/२० वर्षपछि मगरहरूलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बारेमा सोंच्न आवश्यक छ। एक अर्कामा ज्ञान, सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी छ। हामीमा पहिलेभन्दा धेरै चेतना आएको छ। अब नयाँ तरिकाले युगानुसार हाम्रो समाजलाई अघि बढाउन सोंच्नुपर्ने भएको छ।
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ?
अन्त्यमा, खासमा विश्वभरिका मगरहरूलाई जागरुक गराउन मिडियाको आवश्यक छ। मिडियालाई सहयोग गरे, पो संस्थालाई मिडियाले सहयोग गर्दछ। मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ।
https://magarassociationuk.org/wp-content/uploads/2017/09/nem-thapa.jpg 600 506 magarassociationuk https://magarassociationuk.org/wp-content/uploads/2019/03/mauk-logo.png magarassociationuk2017-09-22 12:22:462019-03-26 18:34:04मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ अध्यक्ष: नेम थापामगर, मगर संघ युके